🥇 ▷ Codsiga waqtiga ugu fiican ee shaashadda la dejiyo xaddidaadda waqtiga… ✅
Codsiga waqtiga ugu fiican ee shaashadda la dejiyo xaddidaadda waqtiga…
Waxay walwal weyn ka muujisay qof walba, gaar ahaan waalidiinta, inay carruurtu hadda waqti badan ku bixiyaan aaladda iyo taleefanka gacanta. Nasiib wanaagse, si looga gudbo dhibaatadan, waxaa la sameeyay kormeer shaashad ah. Waxay ka dhigeysaa tracker shaashad ama barnaamij si loogu soo rogo xaddidaadda taleefankaaga gacanta oo ay la socoto waqti xaddidan muddada qalabkaaga ama taleefanka gacantu. Mar haddii waqtiga kama dambaysta ah la gaaro, cunuggaagu mar dambe ma awoodi doono inuu marin u helo astaamaha aaladda ama aaladda moobiilka.
Haddii aad tahay Apple Users gaar ahaan aaladaha sida iPhone ama iPad waxay runtii aqoon u yeelan doonaan shaqeynta Waqtiga Shaashadda. In kasta oo astaantani ay ku shaqeyso ulajeeddooyinka ugu wanaagsan ee lagu xadidayo waqtiga carruurtaadu ku qaadan karto qalabkooda, qaar ayaa sheegaya inaysan sifiican ugu shaqeynin iyaga. Ha walwelin maxaa yeelay waxaa jira barnaamijyo kale oo aad u isticmaali karto kali kale haddii ay dhacdo Apple Waqtiga soo bandhigaha shaqadu wuxuu ku siinayaa dhibaatooyin farsamo ama haddii howsha aan laga helin qalabkaaga ama aaladdaaga.
Waqtiga ugu fiican ee barnaamijka shaashadda
1. Apple wuxuu soo bandhigayaa waqtiyo cusub oo shaashad ah iyo xaddidid codsi
Loogu talagay isticmaaleyaasha aaladaha macruufka, war wanaagsan maxaa yeelay shaqadan waxay ku jirtaa qalabkaaga oo shaashadda waqtiga ayaa awood u yeelan doonta inay shaqadan gasho adoo u tagaya menu Settings. Xulo waqtiga aad u adeegsaneyso aaladdaada. Intaa waxaa sii dheer, astaantan waxaa lagu qalabeeyay lambar ka-helitaan kaasoo ka horjoogsanaya carruurtaada inay beddelaan goobaha waqtiga shaashadda. Intaa waxaa sii dheer, waxay bixisaa oo soo bandhigaysaa howlahan soo socda ee aan aad ugu helno:
Waxaa jira xilli hoose. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad xad u yeelatid waqtigaaga qalabkaaga. Kuu oggolaanayaa inaad xaddiddo adeegsiga qalabkaaga. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad xayirto waxyaabaha aan habooneyn. Waad cayimi kartaa codsiyadee la heli karaa waqti kasta.
Xusuusin: Haddii aad illowdo lambarkaaga gelitaanka, tani waxay kaa horjoogsaneysaa inaad beddesho waqtiga shaashadda, si kastaba ha noqotee, ha walwelin maxaa yeelay waxaad isticmaali kartaa tensoshare 4uKey-iTunes Backup https://www.tenorshare.com/products/iphone-backup -unlocker. html si loo tirtiro loona beddelo furaha marinka shaashadda.
OurPact waa aalad caan ah oo ay adeegsadaan waalidiinta badan. Tan waxaa loo yaqaanaa xallinta-gacanta-hal-hal waalid ee xakamaynta oo kaa caawin doona inaad xaddido waqtiga shaashadda. Waxay sidoo kale la socotaa astaamo kaa caawin doona inaad hesho dadka isticmaala taleefankaaga gacanta. Intaa waxaa dheer, codsigan sidoo kale waxaa ku jira astaamaha soo socda:
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad xirato oo aad furto waxa ku jira. Waxay taageertaa ilaa 20 qalab. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad gacanta ku xirto oo aad gasho codsiyada ama waxa ku jira. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad jadwal u sameysato waqtiga shaashadaada. Waxay la timid ikhtiyaaryo quful oo kala duwan.
3. Daryeeleyaal nadiif ah
Sida magaceedu u dhigan yahay, aaladdan waxaa loo tixgelin karaa inay daryeele u tahay carruurtaada adduunweynaha dhijitaalka ah. Kani wuxuu xannibayaa waxyaabaha ku habboon. Intaa waxaa sii dheer, codsigan wuxuu bixiyaa astaamaha soo socda:
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad dejiso waqtiga shaashada. Jooji waxyaabo aan habooneyn sida ficil-galmeedka Waxay ku siineysaa xakameyn waalidnimo oo buuxda Waxay kuu oggolaaneysaa inaad si toos ah u galaan qalabka
Afar. Waqtiga shaashadda
Codsigan wuxuu gaar u yahay nidaamka abaalmarintiisa. Marka lagu daro awood u lahaanshaha sameynta wakhti go’an ee shaashadda, waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad hadiyado siiso carruurtaada adoo adeegsanaya aaladdooda haddii ay dhameystiri karaan howlaha.
Tilmaamaha uu soo gudbiyay codsigan:
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad jadwal u sameysato waqtiga. U sheeg carruurtaada markay dhammeeyaan waxqabadka. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad eegto codsiyada aad sida ugu badan u isticmaasho.
Codsigan ayaa xakameynaya qof qabatinka arjiga. Tani waxay u oggolaaneysaa adeegsadeyaasheeda inay dejiyaan qawaaniin iyo kontoroolo qalabkooda. Intaa waxaa dheer, qalabkani wuxuu bixiyaa astaamaha soo socda:
Eeg sharciyada la jabiyey U oggolow daawashada xogta adeegsiga iyo macluumaadka U oggolow hagaajinta dhaqanka xeerka Tani waxay xukumaan adeegsiga codsiyada leh xeerar kala duwan
Iyada oo loo marayo liistada kor ku xusan, waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawin karno inaad xakameyso adeegsiga aaladaha carruurtaada ama taleefannada casriga ah adigoo xaddidey waqtigooda shaashadda iyadoo loo marayo barnaamijka waqtiga shaashadda. Noo soo sheeg fikradahaaga adigoo hoos kaga faalooda.